U-Iris Mittenaere: lesi sigameko esimnandi kakhulu nesithandwa sakhe u-Diego El Glaoui - T mov RELAY
UHarry noMeghan eCanada: Imininingwane emisha ku-…
Ukuqashwa Kwabafundi Abancane Abayi-14 Ohlelweni lweFBTD
I-Queen SNUB: INkosana uHarry yaphula kanjani inhliziyo yenhliziyo yakhe ...
Iris Mittenaere nesithandwa sakhe Diego El Glaoui spin uthando oluphelele. Ngakho-ke kungokwemvelo impela ukuthi le nsizwa iseke intombi yayo kuwo wonke amaphrojekthi ayo. Futhi ngemuva kokuthola umshuwalense njengoba Miss Universe, manje kusigaba seParadis Latin lapho sithola u-Iris Mittenaere. Ithuba lokuthi u-Diego El Glaoui alincome. Ngaphezu kwalokho, uMsombuluko ngoDisemba 9, usomabhizinisi waya kumbukiso wesithandwa sakhe. Kuhlelo: ama-choreografti wesibindi kanye namatafula bonke abesilisa nabathandanayo kunabanye.
Umzuzu wokwabelana u-Diego El Glaoui abelana ngawo ekuxhumaneni nomphakathi. Ngempela, le nsizwa eneminyaka engama-31 ibambe i-akhawunti yayo ye-Instagram ukuthi ithumele isibhamu esihlekisayo. Kulokhu, sikubona kuqala ezingalweni zikaIris Mittenaere. Ngemuva kwalokho, u-Diego El Glaoui ubeka nge-poster yombukiso we-Paradis Latin. Ngenkathi u-Iris Mittenaere ekulo, isithandwa sakhe senza sengathi siyamqabula, sihleke kakhulu. "Ababili ngentengo eyodwa" wabuye wahlekisa ngenganekwane. Ngokwakhe, umholi wokubuyekezwa ubuyise izithombe zakhe.
U-Iris Mittenaere no-Diego El Glaoui: umbhangqwana omuhle
Njengesikhumbuzo, kungenxa ye-Halloween lapho u-Iris Mittaneare lahlela ubudlelwano bakhe nengane enhle u-Diego El Glaoui. Ngenkathi kunamahlebezi mayelana nombhangqwana wakhe, lona wesifazane osemusha wathumela isithombe nesithandwa sakhe, bobabili begqoke izifihlakalo zamagazi. "Noma ungeke ukwazi ukukhipha leli gciwane emqheleni bese ulidlulisela." Yebo sephuze kancane ezingeni le-Halloween kodwa sizokubeka lokho kwi-jet lag » wayeveze nje ngenganekwane. Ngemuva komhlekisi Kev Adams nomdansi ochwepheshe U-Anthony Colette, ahlangane naye ngesikhathi ebamba iqhaza kwakhe isizini yesishiyagalombili yoMdanso nezinkanyezi, ekugcineni u-Iris Mittenaere ekugcineni umthole okuthile.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.closermag.fr/people/iris-mittenaere-ce-cliche-tres-amusant-avec-son-cheri-diego-el-glaoui-1058769
TELES RELAY 11780 izikhala 0 amazwana
UHarry noMeghan eCanada: Imininingwane Emisha Mayelana Nezingxoxo Zembuliwe
I-Queen SNUB: INkosana uHarry yaphula kanjani inhliziyo kagogo wakhe ngokuchoboza ...
ENdiya: Umhlangano we-Andhra Pradesh udlulisa imali yokukhokhela ezintathu…
UJacques Fame Ndongo uchaza ukuqashwa kabusha kuka-2000…
Izindaba zakamuva ezivela kuKate Middleton: INDLELA Kate and Wills are…
Iseluleko sikaWenger sika-Arteta ngokungabi nalwazi…
Intengo ye-Samsung Galaxy Note 10 eDubai, United Arab Emirates ……
UKUPHELA KWEMISEBENZI YAMAVidiyo AKUFUNI UKUBONA! - IVIDEO
UJay-Z usula izinyembezi zowesilisa owayeqopha uBeyoncé ngesitimela…
Indlovukazi ephuzi ngenkonzo yenkolo namanye amalungu…
Ungayisebenzisa kanjani iklabishi ngokumelene namabele afakiwe? - IZEMPILO…